कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव – कृषक र प्रविधि
विराटनगर-विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कृषि र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अर्थशास्त्रीहरूले सुझाएका छन् । मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले आयोजना गरेको छलफलमा उनीहरूले कृषिबाट रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै आयातलाई समेत प्रतिस्थापन गर्ने बताए । सामाजिक दूरी कायम गरेर आयोजित छलफलमा अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमलाले यसअघिका सम्पूर्ण योजना, नीतिलाई पुनरावलोकन गरी आगामी दिनका योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुका सार्थ आर्थिक विकासको केन्द्रविन्दु कृषिलाई बनाउनु जरुरी छ । जसले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।” उनले कारोनाका कारण अर्थतन्त्र धाराशायी भएको अवस्थामा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । धमलाले सबै क्षेत्रलाई छाडेर कृषि, पर्यटन र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाए ।
अर्थशास्त्री डा. अर्जुन बरालले विश्व आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट पार पाउन सम्पूर्ण नीतिमै परिवर्तन ल्याई विशेष गरी एग्रो प्रोसेसिङ्ग, एग्रो इण्डष्ट्रियल लिंकेजमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । “कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी सिर्जना गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो,” उनले थपे, “अब विदेश गएका ठूलो संख्याका युवा रोजगारी गुमाएर फर्किँदैछन् । उनीहरूलाई कृषिमा लगाउन सकिए आयात प्रतिस्थापनसँगै रोजगारी गुमाएका युवाहरूको व्यवस्थापन हुने देखिन्छ ।”
अर्थशास्त्री डा. पिके झाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका जनशक्तिलाई तत्काल कृषि क्षेत्रमा खपत हुने वातावरण बनाउन कृषि अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । निजी क्षेत्रका उद्योग-व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । अर्थशास्त्री डा. वेदराज आचार्यले अन्य कुराका साथै शासन सञ्चालनमा पनि सुधार गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरे । “नीति नियम जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभए नीतिको औचित्य हुँदैन,” आचार्यले भने ।
प्राध्यापक विजु थपलियाले आर्थिक एवं उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रलाई वर्तमान अवस्थाबाट पुनर्जीवन दिन एक्सन प्लान बनाउनुपर्ने, रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने, त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले सरकारले अविलम्ब अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति ल्याई कार्ययोजना बनाई यसअघिका नीतिहरूलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढेमा वर्तमान चुनौतीलाई अवसरका रूपमा परिणत गर्न सकिने धारणा राखे ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पूर्ण लोक्सोमले कोरोनाबाट सिर्जित अवस्थाले क्रमभंग भएकाले नविनतम् अवसरको रूपमा आगामी दिनमा अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम् प्रयोग गर्दै त्यसमा आधारित उद्योग-व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने नीति बनाउन प्रदेश सरकारले ल्याउन ध्यान पु-याउने बताए ।
छलफलमा उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले कोरोना भाइरसको महामारी पछि सरकारले कस्तो कार्ययोजना बनाई अघि बढेमा आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहि अर्थशास्त्री, बौद्धिक वर्गसँग छलफल आयोजना गरिएको बताए । उनले आगामी दिन सरकार र निजी क्षेत्र दुवैका लागि चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गरे । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहन नसक्ने भएको बताए । उनले कृषि, पर्यटन, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग र अन्य उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।